Profil de Razanism - Eklablog
Teny vitsivitsy afaka manova ny fiainanao
Ndeha ary ianarana ny fomba ampiasana ny tanjaky ny Teny , ny fomba ampiasana azy amin'ny tena , ho anao. Ny fandrafetam-pitenenana miabo dia hairaha izay mitaky fitsipika tsotra sy mora ampiasaina . Ny BB "idéaly" dia manana toetra ...
Ahoana kosa indray ary no fomba iarovan-tena amin'ny Baikobitsika miiba ?
Homeko fitaovana matanjaka hiarovanao tena ianao . Aza andrasana ela fa tohero haingana , lavo haingana ny BB eritreretinao fa manimba . Ny AF dia saha araka ny efa nolazaina : misy masomboly miiba mitady hifafy ao , aza avela haka faka iza...
Samedi 28 Mars à 13:13
Ahoana no fomba hiarovan-tena amin'ny Baikobitsika mamohehatra avy any ivelany , na avy amin'ny manodidina ?
Tsy vitan'ny hoe tokony hitandrina amin'ny BB tsy fanahy hiniana ataonao amin'ny tenanao isan'andro ianao (BB manimba , indrisy) , fa koa tsimaintsy misahaha ireo BB avy any amin'ny hafa . Hita ny voka-dratsiny eo amin'ny olona iray . Nefa ...
Atsaharo ny fanimpazana hoditr'akondro ho an'ny tenanao na mitondra ozona hoa anao
Tiako ny mitondra eto ny lisitry ny fomba fiteny mahazatra ka tokony hofoananao tanteraka amin'ny Fiteny fampiasanao , ary indrindra fampiasanao an'Eritreritra anaty . Angamba misy amin'izy ireo no averimberinao an'Eritreritra matetika , ne...
Samedi 28 Mars à 13:10
Ny maha-zavadehibe iankinan'ny aina ny zavatra teneninao (na voizinao)
Noho izany antony izany no anomezana lanjany ny Eritreritra tsakotsakoin'ny Fanahy andavan'andro . Ny tsirairay dia miteniteny irery ao an'Eritreriny ao amin'ny ankapobeny . Mba fantatrao ve fa io Fitenenanenan-drery io , na ohatran'ny amai...
Samedi 28 Mars à 13:09
Ny Atifanahy (AF) dia Mpanitatra (Amplificateur) matanjaka.
Nianjadian'ny Herin'ny Teny ianao , Hery tsy hita noanoa . Ny vokatra aterak'ireny teny ireny dia tahaka ny rivotra iainana mihitsy eo amin'ny fiainana andavan'andro . Voatebaka ho mpandainga eo imasom-bahoaka ianao . Mazava loatra fa diso ...
Ny Fahefana na ny Herin'ny TENY
Tonga ao ao amin'ny birao ianao ny marainy . Somary sorena amin'ny olana tsimaintsy hatrehana . Nefa ianao mbola reradreraka tamin'ny fety natrehana ny omaly (Normale , tsingerintaonanao ) . Maikamaika be ihany ianao ka zara aza fa nanam-po...
Ahoana no fomba ampiasana ny Atifanahy mba hahasoa anao ?
Ny Atifanahy dia ambany fahefan'ny Mpanao (sous la loi de la causalité) . Tahaka ny tontolon'ny Misy (monde physique) izay iainantsika ihany . Ny "ERITRERITRA " rehetra dia efa "ASA" daholo . Izany hoe ny "Eritreritra" dia efa Mpanao...
Manatona ny sarangan'ny olom-pinaritra
Tsy mora ve izany raha tenenina hoy ianao !?Voarindrabaiko miabo na miiba ? Fa ahoana no ahafantarana an'izany? Dia hoy aho mamaly izany : MORA , ho fantatrao izany raha mamaky izay manaraka eto ianao . Raha mifoha iny ianao ny maraina , ka...
Samedi 28 Mars à 13:05
Tahaky ny ahoana ny sokajin'ny Rindrabitsika niantefa taminao ?
Tiako indray aloha ianao raha miato amin'ny famakiana fa hijery kely ny mikasika ny Rindrabitsika voarainao amin'izao fotoana . Raha tsy dia idirantsika ny antsimpirihany mety hampisy ny fifahasamihafana kely ombieny ombieny , dia azo lazai...
Ovay ny Rindrabitsikao (Lahabitsika , hoy i MN) dia hiova koa ny fiainanao , fa tsy ho tahaka ny teo aloha
Ny fahafantaranao fotsiny ny fahamarinana mahakasika ny Fanahin'olombelona sy mahakasika ny fiainany dia efa ampy hahatonga anao ho sokajy na sarangan'olona miavaka . Manomboka mitanila ho anao izao ny varavarana mba hidiranao amin'ny tena ...
Ahoana no fiasan'ny Atifanahintsika ?
Vao avy nampitaha tamin'ny lasira malemy ny Atifanahy isika teo , mba ilazana fa azo atao tsara ny mibaiko ka manefy azy . Ny fampitahana tena mampazava azy indrindra angamba dia ny noketrehin'i Dr Maxwell Maltz izay nanoratra ny "Best sell...
Maro ireo RB (Rindrabitsika, programmation) miantefa amin'ny Atifanahy no natelina tamin'ny androm-pahazazana
Fatiantoka lehibe ny androm-pahazazana hoy i Descartes . Tsy hoe tsy tiany ny androm-pahazazana no hevitr'izany satria na izy aza dia Raim-pianakaviana , fa ny tiany havoitra dia satria ny Fanahy mandritra ny Fahazazana dia mora mandray tsy...
Samedi 28 Mars à 12:53
Mahery sady matanjaka ny Atifanahy satria miasa ambadika , miafina amintsika
Mbola lava dia lava , ary betsaka dia betsaka ny ohatra azo tanisaina . Ao ireo mbola henjana sy mavesa-danja lavitra noho ireo efa voalaza . Ao ireo mahamirimiry. Fantatrao ve ohatra fa ny tsy fahombiazana miverimberina mahazo olona iray d...
Samedi 28 Mars à 12:51
Herivaika mahagagan'ny Atifanahy
Fa inona marina moa ny Atifanahy resahantsika io? Maro ny famaritana azy ka aleo tsorina fa tsy voatery hazava tanteraka foana. Ity fampianarana ity nefa dia noketrehina ho fitaovana vonona ho ampiasaina ka tsy ho afaka hiditra amin'ny fana...
Samedi 28 Mars à 12:17
Hiety aminao ve ilay izy ?
Misy ny olona misalasala , miahiahy mahakasika ny Hypnozintena ka mahavatra manambara aza fa ny marivosalosana sy ireo tsy manan-kazondamosina no afaka mampiasa ny Hypnozintena. Mifanipaka tanteraka amin'ny fahamarinana nefa izany. Ny traik...
Fiovana tsy misy tahotra
Iverenantsika kely ny fahasamihafana misy voalaza tany amboalohany eo amin'ny Hypnozy sy ny Hypnosintena . Ny Hypnozy dia misy ny Mpanao ary misy ny Iharana .Ny Mpanao Hypnozy dia mizaka ny fanaovana rehetra , fa ny Iharana kosa dia mandray...
Ireo hery miafina anatinao
Inona no atao hoe "suggestibilité" ? Tsotra dia tsotra , tsy inona akory fa ny fahafahana sy fankatoavan'ny atifanahy ny fandraisana ny toromarika atolotry ny Nymahatsiaro (conscient). Toromarika na baiko miraika ary voaomana mahakas...
Samedi 28 Mars à 12:11
TOKO VOALOHANY Inona no hevitry ny hoe "HYPNOZINTENA" ? Ny fomba tsotra indrindra azo anazavana ny hoe "Hypnozintena" dia ny fanazavana ny atao hoe HYPNOZY. Raha ny fakan-teny no jerena dia grika "hypnos" no niandohany. Ka Andriamanitry ny...
Vendredi 20 Mars à 22:54
FAHOMBIAZANA-FAHALALANA AMIN'NY ALALAN'NY HYPNOZINTENA.
Fampidirana Ahoana ny fomba ampiasanao an'ito FAMPIANARANA ito? Ity boky ampelatananao ity no boky faran'izay soa indrindra ho an'ny fibeazana na fandrosoanao ara-tena , ho an'ny fahombiazanao. Nefa raha hotehirizinao fotsiny fa tsy hovaki...
Vendredi 20 Mars à 22:42
Bonjour et bienvenue sur RAZANISM CONCEPT Fa inona moa ny Razanism ? Mety tonga dia hoy ianao hoe : "fiverenana amin'ny fomba na ny nentin-drazana" . Tonga koa angamba dia ho-raisinao ambolony hoe : hiverina hanao salaka indra...
Vendredi 20 Mars à 21:25
Blogs de Razanism
Razanism n'a pas encore de blogs favoris
Razanism ne suit pas de membre
Razanism n'est suivi par aucun membre